Masiki, Lederhosen, uye doro ok paAir Canada Toronto nyowani kuMunich Ndege
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Masiki, Lederhosen, uye doro ok paAir Canada Toronto nyowani kuMunich Ndege
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Canada Breaking News • Germany Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Bavariaans vanozobvumidzwa kukwira iri kuuya Air Canada 77-9 Dreamliner ndege mumakirasi ese matatu akapfeka Lederhosen kana Dirndl.
Lederhosen aive uye akagadzirwa netsika kubva kuzvinhu zveganda, zvichiita kuti zvive nyore kuchenesa uye kubvisa tsvina uye guruva, mushure mekushanda kwezuva rakaoma. Lederhosen, nekudaro, yaiwanzo kuve yenguva yekushanda-yenguo yaitakura yakanangana netsika nemagariro zvinoreva mutsika nenyika dzinotaura chiGerman. Ivo vane fashoni muBavaria, vanosimudza tsiye kune mamwe maGerman, asi vanofanirwa kutariswa vakasarudzika muOntario kana neCanada yese.
Kutevera kuziviswa kweHurumende yeCanada kuvhurazve miganhu yepasi rose munaGunyana 7, Air Canada yakafumura rumwe ruzivo
Yayo yakarongwa Munich (MUC) - Toronto (YYZ) chirongwa chekubhururuka.
Kusunungurwa kwezvirambidzo kunoita kuti vekunze vakabaiwa jekiseni nemishonga yekudzivirira yakatemwa neHurumende yeCanada (Moderna, Pfizer, AstraZeneca, uye J & J) mazuva gumi nemana zvisati zvaitika uye vanosangana nezvinodiwa zvekupinda muCanada kune vasina-kukosha kufamba.
Germany inobvumidza yakazara-vakabaiwa maCanada kana avo vanokwanisa kuratidza bvunzo dzechokwadi dzeECVID kupinda muGerman nenzvimbo yeSchengen.
Kupfeka Lederhosen kune vanababa uye Dirndl yemadzimai pavanobhururuka vasingamire kubva kuBavarian Capital City yeMunich kuenda kuToronto kunogoneka pasina kusimudza tsiye nemaGerman mune mamwe maguta kunze kweBavaria seFrankfurt.
Vanhu vazhinji muOntario, Canada, vanoda iyo Octoberfest uye vanofungidzira maGerman akapfeka madhiri, lederhosen, uye ngowani dzechiGerman, dzinoonekwa seyakajairwa yeGerman Bavarian Octoberfest zvipfeko.
Lufthansa yanga ichibatanidza Germany neCanada nendege dzisingamire kare, uye kuwedzerwa kweStar Alliance mudiwa Air Canada kutanga patsva nzira yayo kubva kuMunich kusingamire kuenda kuToronto kuchawedzera kune ino yakakosha yekuzorora uye musika webhizinesi.
Munich, Frankfurt, nedzimwe nhandare dzeEurope dzakadai seVienna, Zurich, Amsterdam, Brussels, neParis dzinosangana kuCanada nendege dzakananga uye imwechete.
Ndege nendege uye mubatanidzwa wakasiyana zvinokwikwidza mumusika uyu. Uye zvakare, yakaderera-mutengo uye charter vatakuri vakaita saCondor vanoshandira iyo yeGerman Canada musika kubva kwakasiyana nendege kuGerman nenyika dzakavakidzana.
Nhandare yakakosha kuGerman inoramba iri Chitungwiza (Frankfurt), asi Munich muSouthern Europe State yeBavaria ndiyo yechipiri nzvimbo yakakosha yekubatanidza Germany nenyika
Dzinenge dzese nhandare huru dzakabatana neICHE Chitima system, ichibvumira kubatanidza maguta makuru eGerman nenhandare dzemaawa mukati meawa uye kumhanya kunodarika 200 km / h.
“Sezvo ganhuriro dzekufamba dzadzikira pasi rese, takazvipira kuvaka netiweki yedu yepasi rose nekuenderera mberi sevatakuri venyika yose vanobatanidza nyika neCanada. NevekuEurope vane shungu dzekushanyirazve kuCanada, takagadzirira kubatanidza vatengi nemhuri dzavo neshamwari, ”akadaro Jen-Christophe Hérault, Regional Sales Manager Germany, Switzerland, Austria & Eastern Europe kuAir Canada.
Kufanana nendege dzese, mazuva ano kufara kweAir Canada neMunich Airport kunoenderana nemamiriro azvino.
Naizvozvo, Air Canada yakawedzera kubepanhau rayo. Vapfuuri vane basa rekuona kuti vanosangana vese
zvinodiwa nehurumende zvekupinda, kusanganisira kubata magwaro ekufamba akakodzera, mavhiza, chero zvitupa zvinodiwa zvehutano, nezvimwe zvinodiwa pakukwira ndege dzavanotenga. Kuti uwane ruzivo rwazvino, ndokumbira ushanyire Ruzivo Hub kana webhusaiti yeIATA yeTimatic. Travel Policy: Bhuku rine chivimbo.
Zvinodiwa nehurumende zvinogona kuchinja pasina chiziviso
Caribbean Tourism Inotarisirwa Zvakasimba Nezve Zhizha ...